ISISHWANKATHELO SEPROJEKTHI - Property [in]justice
Kwiminyaka elishumi edlulileyo kubonakele ukunyuka okuzinzileyo ekufunyanweni komhlaba wemveliso yokutya, ukombiwa kobutyebi nophuhliso kwilizwe lonke. Umthetho wamanye amazwe udlala indima enkulu, ngamanye amaxesha kuyaphikisana, malunga noku. Kwelinye icala, uququzelela ukuphathwa komhlaba njengempahla yorhwebo notyalomali, ngelixa kwelinye, ubona ukubaluleka komhlaba (imbonakalo) njengeyona ndawo iphambili yempiliso yabantu, inkcubeko, indalo, kunye nendlela yokuphila. Ngaphandle kokwamkelwa kwelungelo elihlanganyelweyo lobunini bomhlaba kubantu bomthonyama, ufikelelo kubulungisa kuhlala kungumceli mngeni omkhulu kuluntu oluninzi olujamelene nokutshatyalaliswa komhlaba wabo jikelele.
UMHLABA [KWE]ZOBULUNGISA (wama-2020 ukuya kuma-2025) yiprojekthi yophando ephanda indima yomthetho wamanye amazwe ekudaleni ubulungisa bendawo kunye nokungabikho kobulungisa ngokwengqiqo yayo yamalungelo obumnini bomhlaba. Ukudlulela ngaphaya kohlalutyo olusemthethweni lwemveli ukubandakanya imibono neenkcubeko ezahlukeneyo, iprojekthi ijolise ekutyhaleni imida yomhlaba kuze kumelwe ukuqondisisa ngakumbi okusekelwe kumthetho wamazwe aphesheya. Iprojekthi ixhaswa liBhunga loPhando laseYurophu (i-ERC), eliququzelelwe ngu-Amy Strecker, yaza yabanjwa siSikolo sezoMthetho saseSutherland, kwiDyunivesithi yaseDublin.
Ekuphandeni ukuba umthetho wamazwe aphesheya ubuququzelela njani na ubulungisa nokungabikho kobulungisa bendawo ngokwengqiqo yawo yamalungelo omhlaba, iprojekthi ineenjongo ezintathu eziphambili:
Kukuhlaziya ukusebenzisana kunye nokuphikisana phakathi kwamanqanaba ohlukeneyo omthetho wamazwe ochaphazela ufikelelo emhlabeni nokuvavanya ifuthe lale mimandla kwimisebenzi yezekhaya.
Kukuvavanya ukusetyenziswa nokulungelelaniswa kwezithethe zamazwe ngamazwe ngabahlali bendawo ukufikelela emhlabeni, ukubanga umhlaba okanye ukungaluvumi uphuhliso oluchaphazela umhlaba wabo; kuze
Kusetyenziswe imibono neenkcubeko ezahlukeneyo ukukhuthaza ngakumbi ukutolikwa okuthe ngqo kobumnini bomhlaba.
Ikwenza oku ngokusebenzisa iiprojekthi ezincinci ezi-4 ezidibeneyo:
Ukufaneleka kobumnini (Amanda Byer, uPhando lwasemva kwesidanga sePhD)
Ubunzima bobumnini (Sonya Cotton, umgqatswa wePhD)
Ubandakanyo lobumnini (Raphael Ng’etich, umgqatswa we-PhD)
Ukwandisa ubumnini (Amy Strecker, uMphandi oyiNtloko)
USinéad Mercier nguMncedisi woPhando kwiprojekthi aze uDeirdre Norris abe nguMlawuli weProjekthi.